Ny tanànan'ny anjely ambanin'ny COVID-19 dia nirohotra fanintelony
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Thailand » Ny tanànan'ny anjely ambanin'ny COVID-19 dia nirohotra fanintelony
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao • teknolojia • Vaovao Mafana Thailand • Tourism • Vaovao isan-karazany
Bangkok, faritra Atsinanana.
Ary tsy fantatry ny tanàna izay azon'ny tanàna.
Ny creme de la creme an'ny tontolon'ny lalao catur amin'ny seho miaraka amin'ny zava-drehetra afa-tsy i Yul Brynner
Toa tsy iray minitra ny fandehan'ny fotoana
Hatramin'ny nisian'ny spaoro Tiroleana dia nisy zazalahy filalaovana chess tao.
Ny fanovana rehetra ve tsy fantatrao izany rehefa ianao
Milalao amin'ity haavo ity fa tsy misy toerana mahazatra.
Islandy na Filipina na Hastings na ity toerana ity!
Indray alina any Bangkok ary ny oyster eto an-tany.
Hiverina izany, fa mandritra izany fotoana izany, hikatona indray i Bangkok, noho ny onja fahatelo an'ny COVID-19.
Hisy fepetra henjana, ao anatin'izany ny curfew, hapetraka any Bangkok sy faritany dimy mifanila mandritra ny tapa-bolana manomboka ny alatsinainy raha manandrana mamehy ny fisondrotan'ny aretina vaovao Covid-19 ny governemanta.
Fametrahana tsy fahazoana mivezivezy amin'ny 9 ora alina maraina any amin'ny faritany atsimo atsimo indrindra amin'ny Narathiwat, Pattani, Songkhla ary Yala.
Ny lalàna henjana dia hapetraka ho an'i Greater Bangkok, izay misy ny renivohitra sy ny faritany dimy mifanakaiky amin'i Nonthaburi, Pathum Thani, Nakhon Pathom, Samut Prakan ary Samut Sakhon.
Roa herinandro fotsiny ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany any Thailand anisan'izany i Bangkok, fantatra amin'ny anarana hoe The City of Angeles dia nanana fanantenana kely fotsiny 2 herinandro lasa izay rehefa lisitr'izay nisokatra indray tao Bangkok nambara tamin'ny fomba mibaribary. Roa herinandro lasa izay karazana toeram-pivarotana sy orinasa maro hafa any Bangkok no navela nanomboka niasa nanomboka ny 22 Jona 2021.
Androany dia tantara efa lany daty io raha nanambara ny Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) fa misy fepetra hentitra hapetraka ao Greater Bangkok, ao anatin'izany ny fanidiana ny fivarotana lehibe Avelan'ny mpivarotra misokatra mandra-pahatongan'ny 8 hariva.
Ny lalàna vaovao momba izay misokatra na nakatona ao Bangkok dia mibaiko:
Ny trano fisakafoanana rehetra hikatona amin'ny 8 ora alina.
Asa ho an'ny trano entanina ho an'ny orinasa rehetra.
Fampiharana henjana ny fepetra fanalavirana ny fiaraha-monina.
Tsy misy serivisy fitateram-bahoaka manomboka amin'ny 9 alina ka hatramin'ny 3 maraina.
Fanidiana ny zaridainam-panjakana amin'ny 9 ora alina.
Fanakatonana ireo orinasa mety iharan-doza rehetra toy ny salon, spa ary trano fanorana nentim-paharazana.
Tsy misy fivoriana misy olona mihoatra ny dimy, afa-tsy amin'ny fombam-pivavahana.
Nakatona nanomboka tamin'ny 8 alina ka hatramin'ny 4 maraina ny fivarotana fivarotana sy fivarotana.
Hatsangana ny asabotsy manomboka amin'ny asabotsy any amin'ny faritany rehetra mba hanakiviana ny olona handeha.
Ny fanafihana COVID-19 fahatelo dia manafika ny Thai Capita any Bangkok amin'izao fotoana izao amin'ny fahatongavan'ilay delta delta hita voalohany tany India. Ny tranga vaovao koa dia nitombo tany amin'ireo faritany efatra atsimo. Any atsimon'i Thailandy, ny variana Beta no antony. Ny variana Beta dia fantatra amin'ny hoe soritr'i Afrika Atsimo
Thailand dia nahatratra 75 ny olona maty tamin'ny alarobia ary ny aretina faharoa farany avo indrindra, 9,276 9,635, ny alakamisy. Ny isan'ny aretina isan'andro dia 17 tamin'ny 75 Mey. Androany dia olona 19 no maty tany Thailand tamin'ny COVID-XNUMX.
Manana olona sahabo ho 70 tapitrisa i Thailand. Thailandy no laharana 77 manerantany miaraka amin'ny tranga 4670 isaky ny mponina tapitrisa hatramin'ny nahitana ilay virus. Raha ampitahaina amin'ny Etazonia dia 104,244 isan-tapitrisa ary manana ny toerana mampalahelo ny faha-13 avo indrindra eran'izao tontolo izao.
Amin'ny isan'ny maty dia 166 ihany i Thailand ary maty 38 isan-tapitrisa. Etazonia dia laharana faha-21 manerantany miaraka amin'ny 1870 maty isan-tapitrisa.
Misy ihany koa ny tsy fahampian'ny fandriana matotra satria marary maro no mijanona ela kokoa any amin'ny hopitaly ary miadana ny tahan'ny famoahana. Maherin'ny 700 ny olona mandeha amin'ny rivotra.
Ny praiminisitra Prayut Chan-o-cha, izay nitazona ny fivorian'ny CCSA tamin'ny zoma, dia voalaza fa nanoro ny manampahefana hitazona aretina vaovao mandritra ny vanim-potoanan'ny fanidiana ary nilaza fa ny fomba rehetra hiadiana amin'ny valanaretina dia hiatrehana tsara kokoa ny fielezan'ny virus haingana. .
Nanapa-kevitra ihany koa ny praiminisitra fa handray karama telo volana mba hitsimbinana ny volan'ny tetibolam-panjakana amin'ny ady amin'ny areti-mandringana. Nanaraka avy eo ny minisitra kabinetra hafa.
Gen Prayut dia mahazo 125,590 baht isam-bolana, avy amin'ny karama 75,900 50,000 baht ary karama XNUMX baht. Tsy mandray karama amin'ny maha minisitry ny fiarovana azy izy. Ny mpikambana iray ao amin'ny kabinetra dia avela handray karama amin'ny toerana iray ihany, ny karama farany ambony.
Ny famerana ny fanidiana ho any amin'ny faritany voafantina dia nankafizin'ny mpitarika ny orinasa hanenenana ny fahasimbana ara-toekarena.
Bangkok dia ho tanànan'ny anjely indray ary indray alina any Bangkok dia manetry tena indray ny lehilahy iray mafy.